Be loatra ny orana: sahiran-tsaina ny tantsaha any Alaotra | NewsMada
Par Taratra sur 01/02/2020
Rehefa fotorina ireo mpamboly, tsapa ho mbola lavitra ihany ny tanjona antenain’izy ireo amin’ny fameloman-tenany. Ireo ao anaty Cecam sy Otiv sasany milaza fa “…toa hiverina hanjary banky indray angaha, hono, ireo fifampindramam-bola ireo? “.Toa lalàna tamin’ny fitondrana teo aloha, miandry fampiharana fotsiny sisa angaha izy izany? …Efa mivadika io anefa ny toetr’andro. Ampiasaina ny zezika, ampiasaina ny fanafody…tsy hita izay tena vokany. Ny mpamboly tsotra sahirana. Ny mahitahita sy mpanao politika fetsilahy, mampamboly olona any anaty zetra, manimba Tontolo iainana. Novakian’ny lefitry ny Lehiben’ny disitrikan’ Amparafaravola bantsilany io tamin’ny Fetin’ny Zetra farany teo.